Ahoana ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite amin'ny Android M nefa tsy very ny fiantohana ofisialy (ALE21) | Androidsis
Ao amin'ny lesona manaraka azo ampiharina dia hampianariko ianao vaovao farany Huawei P8 Lite mankany amin'ny Android M ny alalan ' Firafitra ofisialy Huawei, tanana alohan'ny handehananao ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA sy izany rehetra izany tsy very ny fiantohana ofisialy ny terminal.
Ity fizotry ny fanavaozana ofisialy ity amin'ny tanana sy ireo rakitra zaraina eto Tsy manan-kery afa-tsy amin'ny maodely Huawei P8 Lite ALE21 izy ireoNoho izany, ianareo izay manana maodely Huawei P8 Lite hafa toa ny ALE23, mikaroha amin'ny Internet sy amin'ny dinika manokana mba hahitana ny fomba marina sy ireo rakitra ilaina mba hanavaozana io maodely manokana io.
1 Fepetra ilaina ilaina amin'ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite mankany Android M
2 Ny fisie dia mila manavao ny Huawei P8 Lite mankany Android M
3 Lahatsary: ​​Ahoana ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite amin'ny Android M tsikelikely
Fepetra ilaina ilaina amin'ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite mankany Android M
Manana a Huawei P8 Lite modely ALE21 tokana ary manokana.
Manana ny Batterie voahazona 100 x 100 ny fahaizany.
Manana toerana fitahirizana ampy ao anaty fahatsiarovana anatiny na ivelany an'ny Huawei P8 Lite.
Sintomy ny rakitra ilaina amin'ny fanavaozana Android M
Ny fisie dia mila manavao ny Huawei P8 Lite mankany Android M
Voalohany, ilaina ny fampidinana fonosana fanavaozana fanampiny izay zara raha milanja megabytes zato ary hanavao ny Huawei antsika Android 5.0.1 amin'ny fananganana B188. Vantany vao nirotsaka ity fanavaozana kely ity, tsy maintsy mampidina ny firmware feno an'ny Android 6.0 Marsmallow isika, firmware iray milanja 1,09 Gb. Ity misy rohy mivantana amin'ny fampidinana ireo rakitra roa:
Update.zip Manamboara B188 Huawei P8 Lite
Firaketana ofisialy Android 6.0 Marshmallow ho an'ny Huawei P8 Lite
Ataovy ao an-tsaina fa ireo rakitra roa dia antsoina hoe update.zip, noho izany dia manoro hevitra anao aho mba hampidina ny fanavaozana ny fampiharana aloha, kopia amin'ny Huawei P8 Lite izay havaozinao ary rehefa vita ny fanavaozana voalohany dia ampidino ny rakitra zip faharoa taty aoriana hofoanana ilay voalohany satria raha tsy izany Ho alaina ho toy ny update.zip (1) izy io ary tsy handeha izy io satria ny fampiharana ny fanavaozana Huawei dia tsy hahita azy ho fonosana fanavaozana.
Vantany vao alaina ny fanavaozana voalohany.zip, Handika azy io amin'ny fahatsiarovana anatiny na ivelany an'ny Huawei P8 Lite ao anaty fampirimana misy ny dload anaranaRaha efa misy ny fampirimana dia alaintsika ao anatiny ary raha tsy misy izany dia hamorona azy avy amin'ny mpikaroka rakitra Huawei ihany isika.
Vantany vao vita izany dia vonona izahay hanaraka ireo dingana izay asehoko amin'ilay horonantsary mifamatotra izay avelako eo ambanin'ireto andalana ireto hanazavana ny fizotrany havaozy Huawei P8 Lite ho an'ny Android M tsikelikely.
Lahatsary: ​​Ahoana ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite amin'ny Android M tsikelikely
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ahoana ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite amin'ny Android M ary tsy very ny fiantohana ofisialy (ALE21)
Raha manana kinova 5.0.2 aho dia afaka manatsara ny 6.0 na tsy maintsy manao ny dingana rehetra.
Tsy maintsy mijery ianao araka ny nolazaiko tao amin'ilay horonan-tsary hoe ao amin'ny kinova firmware izay mifarana amin'ny B188 izay Android Lollipop ianao, raha ao amin'io kinova io ianao dia afaka manavao mivantana ny Android 6.0 amin'ny fanarahana ny dingana farany fotsiny. Raha eo amin'ny B170 ianao na ambany dia tsy maintsy manamboatra voalohany ny B188 ianao vao afaka manavao amin'ny Android M ofisialy soa aman-tsara.
Salama, hitanao fa nametraka ilay Android 6.0 vaovao aho ary tsy dia tiako loatra izany, azonao atao ve ny milaza amiko raha misy ny mety hiverenana amin'ny rafitra fiasa nanomboka teo aloha, ho 5.1? Izany hoe ilay nifarana tamin'ny 170/188.
Maika maika, azafady, misaotra
Inona no tsy tianao? Inona ny fatiantoka hitanao tamin'ny fanirianao hiverina amin'ilay kinova taloha?
Tsy tiako koa izany, azafady mba ampio .. Mba hiverina any Lollipop ..
havaozy ny p8 ary tsy hitako ny safidy hidirana amin'ny maody mpitsidika sy ny maody tompony
Salama, hitako ny horonan-tsarinao ary tsy azoko atao ny misintona ny fonosana B188. Azonao atao ve ny mandefa rohy hafa handefasana azy? Notsidihiko tsara ny rakitra android 6.0 avy amin'ny mega. Misaotra betsaka
Esteban Barrera dia hoy izy:
Raha manana p8 lite version amerikana ale-l04v 100r1c00b124 aho dia mety amiko ny manavao ny lollipop dia afaka mandefa horonantsary misy rohy video ianao manao azy io sy ireo rohy ofisialy misintona sy mametraka amin'ny finday misaotra
Valiny tamin'i Esteban Barrera
+ 244 931792884 dia hoy izy:
na meu huawei eo ALE-L21C185B130
Ahoana no hanafarana na hanavaozana ahy?
Valio ny +244 931792884
Haharitra hafiriana ny famoahana ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA?
Oscar Altares dia hoy izy:
Vao avy nanandrana nametraka ny fanavaozana ny zip b188 aho ary rehefa nametraka ny fanarenana Huawei ho 4% dia nijanona tsy niasa intsony ary nanomboka ny telefaonako. Inona no tsy maintsy ataoko mba hamelako hanavao azy?
Valiny tamin'i Oscar Altares
Te-hanampy aho fa ny findaiko dia tsy manana fahazoan-dàlana ary tsy te-hamaka azy io amin'izao fotoana izao.
rengar dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko.
Ao amin'ny 4% dia manome ahy lesoka izy ary tsy mamela ahy hanavao.
Mamaly an'i rengar
Raha te hametraka ary tsy mahazo an'io hadisoana io dia tsy maintsy mahita ny kinovanao izay anananao, ohatra, raha toa ny kinova ale-l21 ambany noho ny b132 dia tsy mandeha izy, mila mametraka b132 na avo kokoa ianao ary aloha manomboka eo dia manavao ny b170 ianao avy eo mankany amin'ny b188 ary farany amin'ny android 6.0
Toy izao no nanompoany ahy
Salama, manana an'io ao amin'ny kinova b160 aho ary manome ahy ny lesoka ... ahoana ny fomba ahatongavako any amin'ny b170? Nozaraiko ny Rohy
Katara dia hoy izy:
Salama Saul, manana ny ale-l21 b120 aho, aiza no hahitako ireo fananganana miampy, ohatra ny b132?, Nitady pejy maromaro aho nefa tsy nahomby.
Valiny tamin'i Katara
Jose Antonio Flores dia hoy izy:
Tsy maintsy mamoha ny bootloader ianao
Valiny tamin'i José Antonio Flores
ricardo rodriguez dia hoy izy:
Salama aho manoratra avy any Kolombia
Ricardo no anarako
Te hahafantatra aho raha mihatra amin'ny ale 23 ity fanavaozana ity
Ankasitrahako ny valiny
mba tsy hanimba ny terminal-ko
Mamaly an'i ricardo rodriguez
Salama heveriko fa tsy natao ho an'ny ale 23, ho an'ny ale 21 ihany
Ho an'ny ale-21 ihany
Valio amin'i MA L
ggomezu dia hoy izy:
Misy olana ve raha root ny findaiko? Misaotra anao.
Valio i ggomezu
P. Barro dia hoy izy:
4% tsy fahombiazana. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy nohazavaina tsara tamin'ity lesona ity. Ny valiny avy amin'ireo mpitantana ny pejy dia hankasitrahana.
Valiny tamin'i P. Barro
Salama daholo, manana finday mitovy sy mitovy dika amin'ilay horonan-tsary aho ary nahazo ny lesoka fanavaozana tamin'ny dingana voalohany tamin'ny 4% -n'ny fizotrany.
Izaho dia efa niseho tamin'ny beta an'ny lollipop ary nampidina ny efitrano indray avy amin'ny tranokala hafa tamin'ny farany azoko natao.
Amin'ity tranga ity dia nanandrana imbetsaka aho tamin'ny vokatra ratsy.
carlos arenas dia hoy izy:
Salama daholo, manana finday mitovy sy mitovy amin'ilay video aho ary manome ahy ny lesoka fanavaozana amin'ny dingana voalohany amin'ny 4% amin'ny fizotrany.
Mamaly an'i carlos arenas
Azo ahena ambany ve izany amin'ny 6.0 beta ka hatramin'ny 5.0 p8, lite?
Jesosy osuna dia hoy izy:
Ny maodeliko dia ale123 Avy any Mexico aho ary ity amin'ny kinova 5.1 azo atao ve?
Mamaly an'i Jesosy osuna
Felipe Arias dia hoy izy:
Hey Lehilahy tiako ho fantatra ny fomba anananao 5.1 Tiako raha ampitao ahy ilay rohy misaotra
Valiny tamin'i Felipe Arias
sandra10pao@hotmail.com dia hoy izy:
Eny azonao atao
Mamaly an'i sandra10pao@hotmail.com
Abdulrhman dia hoy izy:
Misaotra betsaka fa tiako ilay horonan-tsary ary apetraka amin'ny findaiko izao no tsara indrindra
Valiny tamin'i Abdulrhman
Henry Reyes dia hoy izy:
Nahomby tamin'ny fanavaozana ny B188 aho fa ny fanavaozana ny android M dia tsy vita raha vao manomboka dia nofoanana izany ao anatin'ny dingana milaza amiko fa tsy nahomby ilay fanavaozana
Valiny tamin'i Henry Reyes
rcar azy ireo dia hoy izy:
ahy ny ALE-L23 V100R001C178B247 Misy fanavaozana an'ity terminal ity ve?
Mamaly an'i rcarlos
Salama namana, ny rohy voalohany dia manome fahadisoana amiko ary tsy azoko atao ny misintona azy ary koa manontany anao aho, azonao atao ve ny miverina amin'ny fomba ahatongavako izao? Misaotra anao
Ny rohy mankany amin'ny fisie B188 dia tsy mandeha, afaka mametraka iray hafa ve ianao? Misaotra
Juan Angel Ayala dia hoy izy:
Manana p8 lite avy amin'ny volomboasary aho nanao fanavaozam-baovao avy amin'ny Huawei ka hatramin'ny volomboasary. Raha ny tena izy dia p8 lite -orange -spain -B170 izao dia mitazona rom antsoina hoe pondC50B311 aho. Maimaimpoana ny telefaona fa afaka manavao amin'ny orange aho, na tsy maintsy avy amin'ny voasary. Misaotra
Mamaly an'i juan angel ayala
Fanontaniana iray, raha mampihatra an'ity fanavaozana ity aho, azoko atao ve ny mampiasa ny fiasa sim roa izay nosakanan'ny mpandraharaha ahy?
Cristina Miranda Pastora dia hoy izy:
Salama, manana ny kinova Huawei P8 Lite ALE-L21 B170 an'ny android 5.0 (3.1) aho ary rehefa omeko ny rohy hanavao ny B188 dia milaza izy fa tsy misy izany, olona afaka manavao tsy misy olana ary manampy ahy? ☺
Valiny tamin'i Cristina Miranda Pastora
Daniel Chavarria Barboza. dia hoy izy:
Salama, manana P8 Lite ALE-L02 aho, ahoana no fanavaozako raha B120 izy.
Manana ny fonosana B170 aho fa tsy hamaky izany amiko.
Tsy maninona na lara ALE-21 ilay fonosana.
Valiny tamin'i Daniel Chavarria Barboza.
Salama tsara, nanao izany aho fa ny Huawei dia tsy mihoatra ny sary famantarana ary tsy hitako izay hatao.
John quiroz dia hoy izy:
Salama, manana Huawei P8 ALE-23C40B130 aho, haiko ve ny manavao azy ???? afaka manampy ahy ve ianao avy any Peroa
Valiny tamin'i John Quiroz
Raha manana ny ale 23 aloha ianao hanova azy ho ale 21, karohy amin'ny Internet ny fomba ahafahan'ny sim faharoa sy ny ampahany amin'io dingana io avelanao ao amin'ny ale 21 dia apetrakao ny fanavaozana 170 ary manohy ity fampianarana ity ianao
Marvin dia hoy izy:
Aza ampitaina amin'ny ale 21 satria ale 23 kely kokoa, manana zavatra tsy ananan'ny ale 21 izy, tsara kokoa ny miandry fanavaozana ny ale 23
Valiny tamin'i Marvin
Salama, manana ale23 b180 aho, afaka manavao satria nanandrana ireo rakitra navoakanao aho saingy mavesatra hatramin'ny 2% fotsiny aho ary mampiseho lesoka
Raha afaka manavao azy aho, azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba?
marco antonio villamizar dia hoy izy:
Salama maraina, azonao atao ve ny milaza amiko hoe aiza no ahafahako misintona ny rakitra Update.zip Build B188 Huawei P8 Lite satria toa tsy misintona azy io.
Mamaly an'i marco antonio villamizar
Daniel Acevedo dia hoy izy:
Salama aho nanavao azy fa ny maodely dia miteny hoe "hi6210sft", ny fanangonana dia manamarika azy ho L21. Ny findaiko dia L23 tany am-boalohany, maninona no misy izany lesoka izany ?: C
Valiny tamin'i Daniel Acevedo
Tena tsara, manana olana aho, izay mbola olan'ny rindrambaiko, ary izany dia talohan'ny fanavaozana ny android M, tamin'ny alàlan'ny fihazonana ny kianja, niverina tany amin'ilay rindranasa nampiasako teo aloha aho, fa rehefa manavao ny M it tsia hataoko ela kokoa izany. Inona no tokony hatao?
Francisco mahazo lesoka aho rehefa manandrana mankany amin'ny b188, mijanona amin'ny 4%
Salama namana, miresaka aminao avy any Kolombia aho ary tiako ho fantatra raha toa ka mandeha ho an'ny ale-23 ity dingana ity na raha misy rakitra hafa mifanaraka aminy? Misaotra
Salama ny kinova na ny terminal-ko dia ALE-L02C106B130, misy fanavaozana ho an'io terminal io….
Marta Perez dia hoy izy:
Apetrako izy sy ny zava-drehetra ary hitako ny fanavaozana eo an-toerana ... fa rehefa tonga amin'ny 4% aho dia manome ahy olana ary mahatonga ahy hiverina amin'ny rafitra hatramin'ny taloha
Valiny tamin'i Marta Perez
Salama manana ny b194 aho afaka manavao ny android 6? raha izao no tokony hataoko
salama, ilaina ve ny rohy voalohany? satria tsy miseho
Mamaly an'i rolando
zoro dia hoy izy:
Salama, ny findaiko dia maodely p8 lite ale-l02, izay fantatro fa ilay kinova ofisialy. Ny hany fanavaozana an'io maodely hitako io (ofisialy) dia avy amin'ny faritra Azia. Novakiako ireo takiana ary mifanitsy izy ireo, saingy manana fisalasalana aho raha ny mety no tokony hatao, raha hanova ny fiteny izany na raha hanome olana ahy izany. Misaotra betsaka mialoha ary arahabaina ao amin'ny pejy.
Mamaly amin'ny rinc
Amin'ity fanavaozana ity dia afaka manana gyroscope ny finday?
Salama, ny olana mahazo ahy dia ny nividianako ny Huawei P8 Lite any Orange ary noho izany ny kaody fanangonako dia Orange fa tsy Eoropeana, noho izany tsy afaka manavao izany amin'ny Android Marshmallow aho. Te hahafantatra ny fomba hampitana izany amin'ny eropeana aho, ny kaodiko dia ALE-L21C109B170. Misaotra 😀
Salama manana ny kinova ale-l21c432b194 aho, miaraka amin'ny emui 3.1 sy android 5.0.1 mila mamaky b188 ho an'ny 6.0 android aho
dfadfadfadcdacd dia hoy izy:
https://www.youtube.com/watch?v=4LfxTyLCQ-E ny rohy fahatelo, ny an'ny telcel no nanompo ahy
Valio i dfadfadfadcdacd
Juan Carlos Mora dia hoy izy:
tapaka ny rohy fanavaozana azafady Ampio !!!
Valiny tamin'i Juan Carlos Mora
Raúl Andrés dia hoy izy:
Salama, tuto tena tsara, fa tiako ho fantatra raha azo atao ny mamaka ny finday amin'izao fotoana izao. Ahoana no hamporisihanao ahy hanao izany?
Valiny tamin'i Raúl Andrés
matias valdez dia hoy izy:
Manana b120 Miasa ao aho ary mijanona ny rohy voalohany amin'ilay horonan-tsary
Mamaly an'i matias valdez
markosarv dia hoy izy:
Manana ny b120 aho ary tsy misy na inona na inona nakariko ho ahy, afaka manampy ahy ve ianao?
Mamaly an'i markosarv
[APK] Ampidiro ilay mpandefa Sony vaovao "Concept for Marshmallow" amin'ny Xperia misy anao Android 5.0+
1,2 ny terminal fotsiny no nanavao ny Android 100 Marshmallow